को हुन् आदिवासी मगर र थारु ? – www.janabato.com
entertainment sidebar Popular Taja-update TOP STORIES Trading देश मनोरञ्जन विचित्र संसार
को हुन् आदिवासी मगर र थारु ?
२६ पुष २०७४, बुधबार १४:५६ January 10, 2018 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
जनबाटो डेक्स । नेपालमा बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये सङ्ख्यात्मकरूपले सबैभन्दा ठूलो जातीय समुदाय हो । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार मगरहरूको जनसङ्ख्या १८,८७,७३३ रहेको छ । उनीहरू नेपालका ७५ वटै जिल्लामा बसोबास गर्दछन् । तर, विशेषतः बाग्लुङ, म्याग्दी, तनहुँ, पाल्पा, नवलपरासी, प्युठान र रोल्पा जिल्लामा मगरहरूको बाहुल्यता रहेको छ । उनीहरूको मौलिक सामाजिक परम्परा, भाषा, रहनसहन, चालचलन, भेषभूषा तथा रीतिरिवाज छ । मगर समुदायको थर, उपथर छन् । उनीहरू विभिन्न थर र उपथरअनुसार आफ्ना कुलपूजा गर्दछन् । र, पूजा गर्दा उनीहरू आफ्ना पुर्खाहरूलाई मुल थलोबाट पूजा मण्डपमा बोलाउने विधि गर्दछन् ।
को हुन् थारू आदिवासी ?
थारुहरू नेपालको तराई क्षेत्रको पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका विभिन्न २० जिल्लामा विशेषतः भित्री मधेशमा छरिएर बसोबास गर्दछन् । यस जाति नेपालका आदिवासी जनजातिमध्ये बढी जनसङ्ख्या भएको जाति हो । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा थारू जातिको जनसङ्ख्या १७,३७,४७० छ । थारू समुदायको आफ्नै भाषा, संस्कृति, रहनसहन, रीतिरिवाज, लिपि तथा इतिहास रहेको छ । समाजशास्त्री डोरबहादुर विष्टका अनुसार थारूहरू विशेषतः दक्षिणको थार मरुभूमिबाट आएको हुनाले थारू नाम रहन गएको हो । थारूहरूको बसोबास रहेको तराईको क्षेत्रलाई थारूवान वा थरुहट भन्ने चलन उहिलेदेखिकै हो ।
थारूहरूको स्थान विशेष अलग नाम, थर, भाषा र सभ्यता छन् । थारू नामका आधारमा एउटै जाति भए पनि भाषिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले एकापसमा भिन्नता रहेको पाइन्छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म थारूहरूको पचासौं थर रहेको पाइन्छ । यीमध्ये मोरङ जिल्लामा बसोवास गर्ने थारूहरूलाई मोरङ्गिया, कोशीनदीको तटमा बस्नेलाई खौसिया (कौशिया) भनिन्छ । त्यस्तै, अन्य थारुका अन्य थरहरूमा चितौनिया, लालपुरिया, डंगौरा, गच्छदार, राना, महतो, विश्वास, सुनादा, सरदार, महन्थ, वाँठ, वाँतर, भझौरा, भगत आदि हुन् । त्यसैगरी दाङदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका थारू थरहरूमा दहित, कुशुम्या, सतगौंवा, चमार, राना, डंगौरा, कठरिया, करिया मघरिया आदि रहेको छ ।
थारू सांस्कृतिक सम्पदाले सम्पन्न जाति हुन् । उनीहरूको आख्यान परम्परा साहित्य समृद्ध छ । उनीहरूको आफ्नै भेषभूषा, गरगहना, परम्परागत शैली छ । थारूहरूले विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रअनुसार फरक–फरक किसिमको आ–आफ्नै प्रकारको भाषा, रहनसहन, संस्कार, मूल्यमान्यता, सांस्कृतिक रीतिरिवाज आदि अँगालेको पाइन्छ । थारूहरू प्रकृतिपूजक हुन् । उनीहरू वनदेवीलगायत वनका अनेक प्रेतात्माहरू र देवीदेवताहरू मान्दछन् ।
उनीहरू विशेष गरी जंगलको छेउछाउमा र नदी किनारमा बस्न रुचाउँछन् । जंगलको छेउछाउ बस्ने भएकाले प्रायः पशुपालन व्यवसाय गर्ने गर्दछन् । र, नदी किनारमा रहेकाले माछा मार्ने पनि गर्दछन् । उनीहरूको प्रमुख पेशा भने कृषि नै हो । तर, यस पेशा संलग्न थारू समुदाय अधिकांश भूमिहीन छन् । त्यसकारण अधिकांश थारूहरू कमैया, कमलहरीका रूपमा काम गर्नु परेको अवस्था छ । उनीहरू घरेलु काममा प्रयोग हुने सामग्रीहरू आफ्नै परम्परागत सीप प्रयोग गरी आफंै तयार गर्दछन् । उनीहरूको प्राकृतिक स्रोत साधनसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । यस समुदायको मुख्य पर्व माघी हो । यसलाई उनीहरू नयाँ वर्षको रूपमा मान्ने गर्दछन् । यही अवसरमा उनीहरूले आफ्ना मुखिया (बरघर) चुन्ने गर्दछन् । उनीहरू परम्परागत संस्था बरघर प्रणालीमा अनुशासितरूपमा बस्ने गर्दछन् । यिनीहरूले माघीको साथै अन्य विभिन्न पर्वहरू समयानुसार मनाउँछन् । ती पर्वहरूमा विभिन्न किसिमका गीत शुर, लय र ताल मिलाई नाचगान गरी रमाउने गर्दछन् ।
थारू भाषा भारोपेली परिवारअन्तर्गत पर्दछ । मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएका तराईका विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्ने थारूहरूले प्रयोग गर्ने भाषा थारू भाषा हो । जनगणनामा पूर्वीया र पश्चिमा थारूलाई डंगौरा थारू तथा पश्चिम नेपालकै अर्को समूहलाई राना थारू गरी जम्मा दुई समूहमा मात्र थारू भाषालाई वर्गीकरण गरेको छ ।
हाल थारू भाषामा पनि विभिन्न पत्रपत्रिका, पुस्तकहरू र साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशित छन् भने रेडियो कार्यक्रम, वृत्तचित्र र चलचित्रहरू निर्माण समेत भएका छन् । २०६८ सालको जनगणना अनुसार करिव १५,२९,८७५ जनाले (डंगौरा र राना थारू समेत) थारू भाषा बोल्दछन् । नेपालबाहेक भारतमा पनि थारू भाषा बोलिन्छ । तर, त्यहाँ थारू भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या यकिन छैन ।
थारू भाषाका भेद
थारू भाषा भारोपेली परिवारअन्तर्गत पर्दछ । मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलेका तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने थारूहरूले व्यवहार गर्ने भाषा नै थारू भाषा हो । सरकारले जनगणना लिंदा पूर्वीया र पश्चिमा थारूलाई डंगौरा थारू तथा पश्चिम नेपालकै अर्को समूहलाई राना थारू गरी जम्मा २ समूहमा मात्र थारू भाषालाई वर्गिकरण गरेको देखिन्छ । तर भाषा सम्बन्धमा अध्ययन गर्नेहरूका अनुसार थारू भाषाका विभिन्न भेद छन् । सुदुरपश्चिमाञ्चलदेखि पूर्वाञ्चलसम्म थारूहरूको वसोवास रहेकोले भाषामा विविधता आउनु स्वाभाविकै हो । भाषा विज्ञानको अनुसार प्रत्येक दश कोशको फरकमा एउटै भाषामा पनि फरक पर्दै जान्छ । त्यसको अनुसार थारू भाषामा पनि परिवर्तन देखा पर्नु स्वाभाविकै हो । थारू–नेपाली–अंग्रेजी शब्दकोशका सम्पादन समेत गरेका गोपाल दहितले थारू भाषालाई ९ भाषिकामा वर्गिकरण गरेका छन् । (१) दङगहा (२) देशौरी (३) राना (४) सप्तरिया (५) चितौनिया (६) देउखरिया (७) भौंरहिया (८) नवलपुरिया (९) सुनसरिया (दहित, २०६२) । तर डा. गणेश खरालले पूर्वी, मध्यपश्चिमी तथा पश्चिमी गरी थारू भाषालाई मुख्य ३ भागमा मात्रै वर्गिकरण गरेका छन् (चौधरी, २०६४) । जसको छोटो चिनारी तल दिइन्छ ।
१) पूर्वी थारू भाषा : नेपालको पूर्वी तराईमा बोलिने थारू बोली पूर्वी थारू भाषा हो । यसलाई ‘मोरङ् सप्तरिया’ पनि भन्न सकिन्छ । यस भाषिकामा मोरङिया, सप्तरिया र राजवंिशया तीन प्रमुख उपभाषिका छन् ।
२) मध्यपश्चिमी थारू भाषा : चितवन, बारा, पर्सा, रौतहट, र नवलपरासी जिल्लामा मध्यपश्चिमी थारू भाषा बोलिन्छ । यस भाषिकामा चितवनीयाँ र नवलपुरिया दुई प्रमुख उपभाषिका छन् ।
३) पश्चिमी थारू भाषा : दाङ्देउखुरी, सुर्खेत, बर्दिया, बाँके, कैलाली र कन्चनपुर जिल्लामा पश्चिमी भाषिका बोलिन्छ । यसका डंगौरा, डेउखुरिया, राना, कठरिया र डेसौरी गरी पाँच भेद छन् । डंगौराको मूल क्षेत्र दाङ् उपत्यका हो । यहाँबाट बसाइ–सराइ गरेर गएका व्यक्तिहरू बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेत, रूपन्देही तथा कपिलबस्तु जिल्लामा छरिएर रहेका छन् । वक्ताका दृष्टिले थारू भाषामा डंगौरा पहिलो स्थानमा छ । भाषा बैज्ञानिक अध्ययन गर्ने हो भने राईहरूको झैं थारूहरूको पनि दर्जनौ छुट्टाछुट्टै भाषा हुने देखिन्छ ।
थारू भाषा बोल्नेको संख्याः
२०६८ सालको जनगणना मुताविक नेपालमा थारू जातिको जनसंख्या १७,३७,४७० देखाइएको छ भने २०५८ सालमा थारूहरूको कूल जनसंख्या १५,३३,८७९ लाख थियो । यो नेपालको कूल जनसंख्याको क्रमशः ६.६ तथा ५.८ प्रतिशत देखिन्छ । २०६८ को जनगणना अनुसार थारू भाषा (राना थारू समेत) बक्ताको संख्या १५,२९,८७५ (५.७७ प्रतिशत) छ भने २०५८ मा १३,३१,५४६ (५.८६ प्रतिशत) थारू भाषाका बक्ता थिए । पछिल्लो जनगणनामा पनि थारूहरूको जनसंख्याले चौथो स्थान ओगट्नु महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ ।
थारू भाषा बोलिने देशः
छिमेकी मुलुक भारतमा समेत लाखौंको संख्यामा थारू जातिको बसोबास छ । तर भारतीय थारूहरू थारू भाषा बोल्दैनन् । सघन बस्ती भएको बिहारको पश्चिम चम्पारनका थारूहरू भोजपुरी भाषा बोल्छन् । कतारमा थारू कल्याणकारिणी सभाको स्थापना भएको छ भने अमेरीकाबासी थारूहरूले थारू अराण्ड वल्र्ड संस्था स्थापना गरेका छन् । तर त्यहाँ लगायत अन्य देशमा थारू बोल्नेहरूको संख्या यकिन गरिएको छैन ।
← ज्ञानेन्द्रले भने–‘राष्ट्रिय जागरण पैदा गर्ने आशाको दियो जगाएको छ’
माघे सकरातीलाई आन्दोलनको रुपमा मनाउने नेपाल मगर संघको घोषणा(विज्ञप्ती सहित) →
प्रचण्डलाई बाबुरामले सोधे–‘३० किलोको माला कुन माक्र्सवादी अर्थशास्त्रको सिद्धान्त हो ?’
२९ पुष २०७४, शनिबार १३:१४ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on प्रचण्डलाई बाबुरामले सोधे–‘३० किलोको माला कुन माक्र्सवादी अर्थशास्त्रको सिद्धान्त हो ?’
ज्योती मगरले तताईन महोत्सबको माहोल नेपाली पोसाकमा सरिएर मात्र कला सँस्कृतिको रक्षा हुदैन
२९ पुष २०७५, आईतवार ०१:३५ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on ज्योती मगरले तताईन महोत्सबको माहोल नेपाली पोसाकमा सरिएर मात्र कला सँस्कृतिको रक्षा हुदैन